माओवादी केन्द्र खारेजीको प्रस्ताव प्रचण्डले नै राखेको खुलासा, भिडियो बाहिरियपछि…. — Imandarmedia.com
माओवादी केन्द्र खारेजीको प्रस्ताव प्रचण्डले नै राखेको खुलासा, भिडियो बाहिरियपछि….
काठमाडाैँ । यतिबेला माओवादी केन्द्रका पूर्व नेताहरुले माओवादी केन्द्र खारेजीको माग जोडदार रुपमा उठाएका छन् । निर्वाचन आयोगमा माओवादी केन्द्र खारेजीको विषय पेचिलो बन्दै गइरहेका बेला सो पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पोल खुलेको हो ।
माओवादी खारेजीको पहिलो प्रस्ताव नै प्रचण्डले गरेको खुलासा भएको छ । केहि दिन देखी माओवादी पृष्ठभूमी भएका एमाले नेताहरुले माओवादी केन्द्र अवैद्य भएको भन्दै खारेज हुन पर्ने जिकीर सहित निर्वाचन आयोगमा तोकता गरिरहेका छन् । आयोगमा उजुरी बोकेर जाने बेलाका नेतृत्वकर्ता पूर्व माओवादी नेता हाल एमाले गण्डकी प्रदेश कमिटीका सह इन्चार्ज लिलाबहादुर थापाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलेनै पहिलो पटक माओवादी केन्द्र खारेजीको प्रस्ताव गरेको ठोकुवा गरेका छन् ।
यता माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेका नेताहरु अहिले दिनहुँ जस्तो माओवादी केन्द्र खारेजीको माग राखेर निर्वाचन आयोग पुगिरहेका छन् । केहि दिन अघि लिलाबहादुर थापा सहितको टिमले माओवादी खारेजीको लागी लिखीत उजुरी दिएका दिए । आज त टोपबहादुर रायमाझी , प्रभु शाह सहितका नेता दलवल सहित निर्वाचन आयोगमा पुगे ।
निर्वाचन आयोग पुगेर एमालेका नेता टोपबहादुर रायमाझीले नेकपा माओवादी केन्द्र भूमिगत शैलीले चलिरहेको पार्टी भएको आरोप लगाएका छन् । शुक्रबार नेकपा माओवादी केन्द्र खारेजीको माग गर्दै परेको निवेदनका विषयमा बुझ्न अन्य नेतासहित निर्वाचन आयोगमा पुगेका नेता रायमाझीले माओवादी केन्द्र संविधान, कानून र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार नचली भूमिगत शैलीमा चलेको आरोप लगाए ।